स्कुल बिदा हुने बितिकै मलाई सरले भित्र लगेर गर्नु भयो ! - Samachar Post Dainik
स्कुल बिदा हुने बितिकै मलाई सरले भित्र लगेर गर्नु भयो !
स्कुल बिदा हुने बितिकै मलाई सरले भित्र लगेर गर्नु भयो<
बंगलादेश मा एउटा घटना घटेको छ ८ कक्षा मा पढ्दै गरेकोपूरा भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस !!
बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो- म’हिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म ।
यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ ।
जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिना’वारीपछिको
पूरा भिडियो हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस !
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गो’प्य क्या’मेरामा कै’द गरिएको थियो ।
के छ भिडियोमा ? एक यु’वती बा’थरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् ।
त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको श’रीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ ।
त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *
*****मेरो बिहेको रात थियो।पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ।
मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए। म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ।
मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ।उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे,एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ म ३५ वर्षकी थिएँ र मसँग शा रीरिक स म्पर्क गरेको अनुभव थिएन।
त्यो अस्वीकार्यता एकदमै पी’डादायी थियो।कलेजको बेला र काम गर्दा मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे,एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ।
के मलाई पनि जिन्दगीमा त्यस्तो साथीको चाहना थिएन?मेरो ठूलो परिवारमा चारजना दाजुभाइ,एक बहिनी र वृद्ध भइसकेका अभिभावक थिए।
तर पनि मैले सधैँ एक्लो महसुस गर्थेँ।मेरा दाजुबहिनीको बिहे भइसकेको थियो र उनीहरूको आफ्नै परिवार थियो। बेला–बेला मैले सोच्थेँ मेरो उमेर बढ्दै गएको र म एक्लो भएकोबारे उनीहरू के नै चासो राख्थे र?
मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो।तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ।बेला–बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो।के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृ णा गर्छन्?के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो?के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ?
के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु?यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे। मैले भोलिपल्ट सोधेँ,उनले भने– मलाई सञ्चो भएन।तर केही पनि परिवर्तन भएन।हाम्रो दोस्रो,तेस्रो र कैयौँ रातहरू त्यस्तै रहे।
म त्यस्तो व्यक्तिका लागि प्रतीक्षरत छु।त्यस्तो व्यक्ति नभेटुञ्जेल मैले आफ्ना साथीहरूको यौ नजीवनबारे गो’प्यरूपमा कुराकानी गरेर आफूलाई सन्तुष्ट पारिरहेकी छु।मैले जे गरेकी छु त्यसका लागि मबारे धारणा बनाउने मानिसहरूको कुनै कमी छैन।मलाई विश्वास छ ती मानिसहरूले बुझ्नेछन् कि महिलाहरू निर्जीव होइनन्,उनीहरूका पनि अनेकौँ भावना हुन्छन्।
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७८, आईतवार ०७:२६